Tag tahiry: sonic nify
Dom » Entries tagged with "sonic toothbrush"
Ny Oral-B dia manambara ny tsiambaratelon'ny borosy nify iO vaovao miaraka amin'ny faharanitan-tsaina. Mandondona ny vid ...
am-bava-b, sonic nify
Na dia ahoana na ahoana, dia zava-dehibe fa miresaka izy ireo. Manontany tena aho raha ny PR avy amin'ny Oral-B no tena te-hahita fatra-panambarana toy izany, saingy ny nify valahany vaovao no angatahan'izy ireo. Amin'ny fotoana iray hahazoana brousse sonic lehibe ho an'ny 200 ...
Colgate Hum no mpanamboatra nify vaovao vaovao misy hakingan-tsaina
Colgate, Colgate hum, sonic nify
Ao amin'ny tontolo iray izay i Xiaomi, Oclean sy Oral-B no mitarika ny lalana amin'ny borosy marani-tsaina, sarotra ny miditra ao an-tsena. Saingy nanandrana i Colgate ary nampiseho ny borosiny AI vaovao. Hitsangana avy eo ...
Xiaomi dia mamoaka borosy nify iray hafa - Oclean Z1 eny akaiky eny!
Ny borosy nify herinaratra dia tsara kokoa noho ny nify vita amin'ny nentin-drazana. Mahomby kokoa izy ireo rehefa manala plakta. Ary noho izy ireo mora kokoa ny fampiasana ny borosy nify herinaratra dia safidy tsara indrindra ...